Chaizvoizvo "Zvemagariro" Midhiya? | Martech Zone
Icho chaicho "Zvemagariro" Midhiya?
Chipiri, June 19, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndine shamwari makumi matatu neshanu Facebook, 122 kubatana paLinkedIn, 178 Nhengo mune yangu MyBlogLog munharaunda, gumi nevaviri paMySpace, shamwari makumi matanhatu paYahoo! Instant Messenger, makumi maviri paAOL Instant Messenger uye yekumhanyisa 60 kufona pa Plaxo! Iniwo ndiri Ryze, MyColts.net, Jaiku, Twitter uye ini ndakaverenga nezve gumi nemaviri emablog mablog (pakati pe mazana matatu kana mamwe mafidi andinounganidza nekuongorora).
Ndiri kunyara kuudza vanhu kuti ndine matatu maakaundi eInternet… kwete rimwe chete. Foni yangu yakabatana, imba yangu yakabatana, uye ndine T-Mobile account yekuwana kubva kuStarbucks neMiganhu (kwandino do kusangana neshamwari). Ndinewo kubasa, hongu. Iwe unogona kuseka, asi mikana ndeyekuti iwe uchave wakasungwa padanho rakaenzana mumakore mashoma, futi. Izvo zvinongoitika kuva basa rangu uye hobho.
Kupiwa ese enhau enhau ini ndiri chikamu chawo, ndiri here iyeye wehukama?
Ini ndanga ndichitaura nevamwe vasiri-purofiti kushambadzira nyanzvi rimwe zuva uye ini ndakaedza kutsanangura Life Second kwavari. Edza kutsanangura Hwechipiri Hupenyu kupurinda vezvenhau kushambadzira nyanzvi uye haugone kubatsira asi kuwana mamwe magegedhi uye ma snickers. Pakupedzisira mumwe munhu akati:
“Izvi hazviite senge zvemagariro kwandiri. Zvinonzwika sekushora magariro. ”
Chinyorwa Cangu: Hwechipiri Hupenyu zvirokwazvo chikamu cheuber-geekdom chandisiri kuyedza kuwana. Ndine zvinonetsa zvakakwana neangu Hupenyu Hwekutanga pane kushanda rweChipiri.
Ini ndinofunga anga akafa-on. Uku hakusi kwehukama zvachose. Zvemagariro zvinoda zvinopfuura kungotarisa, kuverenga kana kuteerera… pane kuziva mutauro wevanhu, kukwezva, kubata, kunhuwidza… kungotarisa mumaziso avo.
Dzimwe nguva pandinenge ndichinyatsoita basa rangu, mwanasikana wangu anosvika pakombuta kumashure kwangu (chaiko tsoka nhanhatu) uye IM ini… “Mhoroi Baba! lol ”(ane makore 13). Ini ndinowanzo tenderera ndotanga kuseka ... zvinoreva kuti ndanga ndiri pakombuta kwenguva yakareba zvakakwana uye ndoda kupedza imwe nguva ndisiri kure nemonitor. Nekutenda, anozozvambarara pamusoro pechigaro changu uye obva abuda mandiri kudzamara ndasimuka kubva palaptop. Ndine rombo rakanaka kuva nemumwe munhu ane hanya zvakakwana nezvangu kuti aite izvozvo.
Muna 2000, a tsoko akadzora ruoko kuburikidza neInternet. Ikozvino pane kutangisa, kunodaidzwa Numenta, iri kushanda kuti ifanane nehungwaru hwekunyepedzera nehungwaru hwevanhu.
Izvi zvave kutanga kundifungisa maTelosians pane yekutanga Star Trek episode. Ivo vaive madhuve akashata ane misoro mikuru yakakora yaizochengeta vanhu musungwa nekugadzira fungidziro mumisoro yavo telepathically. (Ndiudze iwe unorangarira izvo chiitiko, "Iyo Cage". Yaive pre-Shatner kunyangwe! Mutyairi anodhura kwazvo paNBC).
Isu taingove takabatana pabasa, ipapo kumba, iko zvino pamafoni edu… ko huropi hunotevera here? Tichava nechero mhando yehupenyu kunze kweInternet? Zviri kuita zvinotyisa, handizvo here?
Ah chokwadi, kana tikakwanisa kubatanidza kuburikidza nehuropi kuenda kuInternet, chimbofunga kufunga nekukurumidza kwatingaita kunyora nekutumira kodhi. Ini ndaigona kuvaka yekuvandudza purazi ine pombi mukofi uye mashed pizza kuburikidza nemudumbu machubhu uye kuvaka Imwe pfungwa shanu Hupenyu. (Kumwe kunhu kuri pakati pekutanga uye kwechipiri Hupenyu).
Hazviite senge zvemagariro kwandiri, futi. Ini ndoda kubuda zvakanyanya.
PS: Iwe unofunga chii kuti Brain 'Net account inomhanya?
Tora iyo iPhone!
Ino inguva yakaipa yekukuudza kuti iwe wakarasa KONSITI konzati paLawn neChishanu manheru, kana nguva yakanaka yekukuyeuchidza kuti kuvapo kwako kwakarasika? Nhanho yakanaka neyako nguva nenguva kusunungura. Yakandishandira chaizvo, chaizvo. Ini ndinogona kuve neruzivo shoma asi ini ndinonzwa kunge ndine hukama nevanhu.
Kupotsa konzati Chishanu zvechokwadi akafuridzira iyi posvo, Julie! 🙂
Chinja foni yako nguva nenguva.
Chinja email nguva nenguva.
Enda unoona makomo nemasango uye gungwa!
Hapana kudikanwa kweHupenyu hweChipiri, kwete, thx!
Ini ndine tekinoroji yakakwana mu hupenyu hwekutanga ikozvino! 🙂